को-भिड ठीक भएपछि पनि यी कुरामा ध्यान नदिए ज्यान जानसक्छ !
काठमाण्डौ : अहिले कस्तो छ अवस्था ? कि अझै समस्या छ ? रिपोर्ट त नेगे’टिभ आयो नि ? तपाइँमध्ये कतिले आफ्ना आफन्त वा साथीभाइसँग पछिल्ला केही दिनदेखि
यस्ता प्रश्न राख्दै आउनुभएको होला। हो, धेरैजसोले को\_रोनाविरु’द्धको ल’डाइँ जितिसके तर यसबाट मु’क्ति भने अझै प्राप्त भइसकेको छैन। को\_रोनामुक्त भएपछि कतिपय मानिसले अन्य समस्या पनि सामना गरिरहेका छन्।
कसैलाई छिटै थकाइ लाग्ने त कसैलाई सास लिन समस्या भइरहेको होला। कसैलाई मु’टुको समस्या त कसैलाई अन्य समस्याहरु देखिन थालेको सुन्न र देख्न पाइन्छ। चिकि’त्सक हरुका अनुसार पोस्ट को’डिभ केयर अ’र्थात को’रोनाबाट मु’क्त
भएपछि पनि स्वास्थ्यको ख्याल उति नै आवश्यक हुन्छ।
हप्तौँ वा महिनौँसम्म पनि सत’र्कता अपनाउन आवश्यक हुन्छ। नत्र सानो लाप’रबाहीले पनि ठूलो समस्या निम्याउन सक्छ।
शरीरमा को’भिडको असर
धेरैजसो मानिसले कोभि’डलाई सामान्य रु’घा’खोजीजस्तै बिरा’मी ठान्छन्। यसले केवल फो’क्सोमा मात्र असर गर्ने सम्झिन्छन्। तर त्यस्तो होइन।
को’भिड नयाँ संक्र’मण हो। यसले शरीरका अन्य कुन–कुन अंगमा असर गर्छ भन्ने कुरा विस्तारै–विस्तारै बाहिर आइरहेका छन्। यसले मानिसको मु’टु, दिमाग, मां’सपेसी, धमि’नी र नसा, रगत, आँखाजस्ता शरीरका अन्य अंगमा पनि असर गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लागिसकेको छ। यही कारणले हृद’यघा’त, डिप्रे’सन, थकान, शारीरिक दुःखाइजस्ता समस्याको सामना संक्र’मणमु’क्त भएकाहरुले गरिरहेका छन्।
त्यसैले चिकि’त्सकहरुले कोरो’नामुक्त भएपछि शरीरमा देखिने त्यस्ता समस्यालाई नजरअन्दा’ज नगर्न सु’झाव दिन्छन्। शरीरमा अन्य समस्या देखिना साथ सल्लाहसुझा’व लिन चिकि’त्सकहरुले आ’ग्रह गर्दै आएका छन्।
हल्का ल’क्षण भएको को’भिडबाट निको भएपछि के गर्ने ?
चिकित्सकहरुले हल्का लक्षण भएको को’भिड देखिएका धेरैजसो मानिसहरु घरमै ठिक भए पनि पोस्ट को’भिड केयर आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनीहरु धेरैजसोमा शारीरिक कम’जोरी, थ’कान, भोक नलाग्ने, दुःखाइ, शरीरको ताप’मान बढ्ने, डरजस्ता समस्या देखिने हुँदा निको भएपछि यस्ता समस्या देखिन सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
यसका लागि चि’कित्सकहरुले यस्ता सुझाव दिएका छन्
– यदि हल्का लक्षण देखिएको छ तर आफूलाई स्वस्थ महसुस गर्नुहुन्छ भने १४ दिन घरमै आइ’सोलेसन बस्न सक्नुहुन्छ।
– निको भएपछि खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। हरियो सागसब्जी र प्रो’टिनयुक्त खाना धेरै खानुहोस्। यसले को’रोनाबाट कम’जोर बनेको शरीरको प्रतिरो’धात्मक क्षमता बढाउँछ।
– नियमित योग तथा प्रणा’याम गर्नुहोस्। एकैपटक थुप्रै काम नगर्नुहोस्।
– संक्र’मणमु’क्त भएको १५–३० दिनसम्म अ’क्सिजन, ज्व’रो, रक्त’चाप, सुगरको नियमित जाँच गर्नुहोस्।
– संक्र’मणमु’क्त भएपछि हरेक ७ मा चिकि’त्सकसँग अवश्य स्वास्थ्यजाँच गराउनुहोस्।
चिकित्सकहरुले सं’क्रमणमु’क्त भएको १०–१५ भित्रै नियमित काममा फर्किन सकिन्छ। तर चिकित्सकले कुनै औषधि खान सल्लाह दिएका छन् भने अवश्य खानुहोस्। नियमित चिकित्सकको सल्लाह पनि लिनुहोस्। कोरो’नामुक्त भएकाहरु धूम’पान र मद्यपा’नबाट टाढै बस्नुपर्ने चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन्।
कम गम्भीर र धेरै ग’म्भीर लक्ष’ण भएका बिरा’मीले कोरो’नामुक्त भएपछि के गर्ने ?
– कम ग’म्भीर र धेरै गम्भी’र लक्षण भएको कोरोना संक्र’मणबाट मुक्त भएका बिरा’मीहरुले शरीरमा पानीको मात्रा सही राख्नका लागि तरल पदार्थ सेवनमा बढी जोड दिनुपर्छ।
– यस्ता बिरा’मीलाई पूर्ण रुपमा निको हुन ३ महिनासम्म लाग्ने भएकोले आराम गर्नु नै ठिक हुन्छ।
– निको भएपछि व्यायाम र प्रा’णायाम गरेर दिनको सुरुआत गर्नुपर्छ।
– यस्ता बिरामीले निको भएपछि नियमित रुपमा शरीरमा अक्सि’जनको मात्रा चेक गर्नुपर्छ। चिकित्सकको सल्ला’हबमोजिम अन्य जाँच पनि नियमित राख्नुपर्छ।
– मानसिक तना’व लिनुहुन्न।
– चिकित्सकको रायसल्लाहअनुसार दिनच’र्या बनाउनुपर्छ।
– केही बि’रामीको निको भएपछि मांस’पेसी क’मजोर भएको हुन सक्छ। यस्तोमा प्र’चूर मात्रामा प्रोटिन’युक्त खाना खानुपर्छ।
– केही बिरामीमा निको भएपछि पनि औष’धिको साइड इफे’क्ट हप्तौँसम्म रहन सक्छ। त्यसैले निको भएपछि नियमित रुपमा
शरीरमा देखिने समस्याका विषयमा चिकित्सकसँग रायसल्लाह लिनुपर्छ।
– संक्रम’णमुक्त भएपछि चिकित्सकको नियमित फलोअप जानुपर्छ। कुनै जाँच गर्नुछ भने गर्नुपर्छ।
– मास्क अनि’वार्य रुपमा लगानुपर्छ। हात बारम्बार धनुपर्छ। सामाजिक दू|री कायम गर्नुपर्छ। -बिजसाला बाट
२०७८ जेष्ठ १, शनिबार १२:५९ गते 1 Minute 3710 Views